रूसी सदन काठमाण्डौं, नेपाल | रुसी फिल्मी सप्ताह
रुसी फिल्मी सप्ताह
२६ देखि ३० सेप्टेम्बर सम्म, काठमाडौंस्थित रूसी हाउसमा "रूसी सिनेमाको एक हप्ता" आयोजित गरिएको छ। तीन आधुनिक रूसी फिल्महरु प्रदर्शनको लागी प्रस्तुत गरीएको छ।
-१५:३० बजे सेप्टेम्बर २६,२७ का दिन फिल्म "कालाशनिकोभ"। यो फिल्म लेजेंडरी परियोजना "AK-47" को आविष्कारक मिखाइल चिमाफेयेभिच कालाशनिकोभको जिन्दगीमा आधारित छ। आफ्नो कारिगरी र शिप उनले आफैं विकास गरेका थिए। उनले आफ्नो जीवनमा अनगिन्ति कठिन परीक्षणहरु भोग्नुपरेको थियो आफ्नो लक्ष प्राप्ति अघि ।
-१५:३० बजे सेप्टेम्बर २८ ,२९ का दिन फिल्म "आकाशको मापन माईलमा गरिन्छ" रहेको छ। उनले संसारको सबैभन्दा ठूलो एमआई ८ हेलिकप्टर बनाए। उनले नै संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली परिवहन हेलिकप्टर मि -१२ सिर्जना गरे। रूसी हेलिकप्टर उड्डयनका लागी, उनको थर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ जत्ति "कोरोलेभ" थर कोस्मोनॉटिक्स को लागी । उत्कृष्ट सोभियत हेलिकप्टर डिजाइनर मिखाइल लेओञ्चियेभ मिल को जीवन र भाग्यको बारेमा यो फिल्म रहेको छ। "MI" हेलिकप्टरहरुको निर्माता को भाग्य।
-१२:३०, १५:३० बजे सेप्टेम्बर ३० का दिन , फिल्म "हुलाक खाम" . मस्को . हाम्रा दिनहरु - नामक फिल्म देखाइदैछ। एउटा अनौठो पत्र गल्तीले एक वास्तुकला कम्पनीमा आइपुग्यो। त्यहाँका कार्यालय सचिवले पत्र गलत ठेगानामा आईपुगेको बुझेर, ड्राइभर इगोरलाई सही ठेगानामा यो चिट्ठी पुर्याईदिन भन्छन्। तर ठिक त्यही पलबाट, अकथनीय चीजहरु उनको जीवनमा घटन थाल्छन्: दुर्भाग्यपूर्ण यो खामले उनको पिछा छाड्दैन , मानौं उद्देश्यपूर्वक नै त्यसले उनलाई एउटा रहस्यमय ठेगानातर्फ अघि बढन बाध्य गराउँछ।
फिल्म स्क्रीनिंग नि: शुल्क रहेको छ। वर्तमान विश्वव्यापी महामारी कोभिड विरुद्ध आवश्यक स्वास्थ्य नियमहरु अनुपालन गर्नु पर्ने भएकाले, प्रवेश अघि नै आफूलाई दर्शकको सूचीमा लेखाउन भने जरुरि छ। सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई हार्दिक स्वागत छ।